The Irrawaddy's Blog: ငွေကြေးစုံစမ်းရေးဌာနက ဦးနေဝင်းမိသားစုရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို စစ်ဆေးခဲ့
ငွေကြေးစုံစမ်းရေးဌာနက ဦးနေဝင်းမိသားစုရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို စစ်ဆေးခဲ့
အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေဝင်းရဲ့ မိသားစု ဘဏ်လုပ်ငန်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ် လို့ ငွေကြေးစုံစမ်း ထောက်လှမ်းရေး ဌာန အဆင့်မြင့် အရာရှိတဦးက ပြောပါတယ်။
စစ်ဆေးမှု ရလဒ်ကိုတော့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မရှိပါ။
ငွေ ရေတွက်နေသော ရန်ကုန်မြို့ ဘဏ်တခုမှ ဝန်ထမ်းများ (Photo: JPaing / The Irrawaddy)
ဒီအကြောင်း ဧရာဝတီသတင်းတပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Burma’s Financial Intelligence Unit Probed Ne Win Family’s Investment မှာ ရေးထားပါတယ်။
လင့်က http://www.irrawaddy.org/business/burmas-financial-intelligence-unit-probed-ne-win-familys-investment.html ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လက Asia Green Development (AGD) ဘဏ်ရဲ့ အစုရှယ်ယာ အများအပြားကို ဦးနေဝင်းမိသားစုက ၀ယ်ယူတယ်လို့ သတင်းထွက်ပါတယ်။
ဒီသတင်း မီဒီယာမှာ မဖော်ပြခင်ကတည်းက ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အစပြုပြီးဖြစ်တယ်လို့ ငွေကြေးစုံစမ်း ထောက်လှမ်းရေး ဌာန ဒု တပ်ဖွဲ့မှူး ဦးကျော်ဝင်းသိန်းက သတင်းသမားတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်က ပြောပါတယ်။
သူတို့ရဲ့စုံစမ်းရေးအခြေအနေ ဘယ်လို ရှိတယ်ဆိုတာကို သူက ထုတ်မပြောပေမယ့် ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆက်လုပ်ရေးကို ခွင့်ပြုထားတယ်လို့ ဆိုတယ်။
သြဂုတ် ၂၁ ရက်က ရန်ကုန်မြို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ငွေကြေးခ၀ါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း တိုက်ဖျက်ရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ သတင်းသမားတွေကို အဲဒီလို ပြောလိုက်တာပါ။
ဘာကြောင့် စစ်ဆေးရေးဝင်ရကြောင်းကိုတော့ ဦးကျော်ဝင်းသိန်းက မပြောပါဘူး။
ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသတင်းကြောင့် ထွက်လာတဲ့ မေးခွန်းကြီးကတော့ ဦးနေဝင်းမိသားစုက ဒီငွေတွေကို ဘယ်ကရလာသလဲ ဆိုတာပါပဲ။
အဲဒီသတင်း လူပြောများစတုန်းကတော့ ဦးနေ၀င်း မြေးအကြီးဆုံးဖြစ်သူ ဦးအေးနေ၀င်းက ဧရာဝတီကို ရှင်းပြတာကတော့ ...
တရုတ်ကုမ္ပဏီတခုကနေ ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၉ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တာ ရှိတယ် ဆိုတာပါပဲ။
အစုရှယ်ယာ ၆၀ % ဝယ်ယူဖို့အတွက် AGD ဘဏ် တည်ထောင်သူ ဦးတေဇ နဲ့ သဘောတူညီပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
သို့သော်လည်း ဦးနေ၀င်း မိသားစုကို AGD ဘဏ်ရှယ်ယာ ရောင်းမယ့် ကိစ္စ ပြန်စဉ်းစားနေတယ်လို့ ဦးတေဇက ပြောဆိုကြောင်း http://burma.irrawaddy.org/business/2014/08/12/63083.html သတင်းမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ပြန်စဉ်းစားရခြင်း အကြောင်းရင်းကိုတော့ ဦးတေဇက သေချာ ရှင်းပြခြင်း မရှိပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ လအတွင်း ငွေကြေးစုံစမ်း ထောက်လှမ်းရေး ဌာနက ဘဏ်တွေမှာ သံသယဖြစ်ဖွယ် ငွေသွင်း ငွေထုတ်မှုတွေကို စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီဌာနက ဘဏ်တွေဆီကနေ သံသယဖြစ်ဖွယ် ငွေသွင်း ငွေလွှဲမှုအကြောင်း အစီရင်ခံစာ လစဉ် တထောင်ကျော် ရနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted in: Business , Sithu Linn , စီးပွားရေး
THUGS,THIEVES & CROOKS are always above the LAW in our country.
They are fully protected by Army & Police.
There will be nothing after investigating.